စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ပွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ[မှတ်စု ၁]၏ အမျိုးသားနိုင်ငံတော်သီချင်း
တန်ဟန်၊ ၁၉၃၄ ခုနှစ်
နိ အာ၊ ၁၉၃၅ ခုနှစ်
၄ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၈၂(တရားဝင်)
၁ ဇူလိုင်လ ၁၉၉၇ (ဟောင်ကောင်)
၂၀ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၉၉(မကာအို)
၁၄ မတ်လ ၂၀၀၄ (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရ)
၁ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၇ (တရားဝင်)
"စေတနာ့လူငယ်များ၏ ချီတက်ခြင်း" (တေးဂီတ)
စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ပွဲ သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နှင့် ၎င်း၏ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသများဖြစ်သည့် ဟောင်ကောင် နှင့် မကာအိုတို့တွင် လွှမ်းမိုးသော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား နိုင်ငံတော်သီချင်း ဖြစ်သည်။ ယခင်တရုတ်နိုင်ငံတော်သီချင်းများနှင့်မတူပဲ ဤသီချင်းကို ဂန္ထဝင်တရုတ်ဘာသာစကား(ရှေးရိုးစာပေဟန်ဘာသာစကား)ဖြင့်ရေးသားခြင်းမပြုဘဲ ဒေသန္တရ တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့်သာ ရေးထားသည်။
၂.၁ လက်ရှိမူရင်း ဗားရှင်း
၂.၂ ၁၉၇၈–၁၉၈၁ ခုနှစ် ဗားရှင်း
ဤအပိုင်းမှာ ဗလာဖြစ်နေသည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။ (မေလ ၂၀၂၀)
"စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ချီတက်ပွဲ" သီချင်း ပါဝင်သော ရုပ်ရှင် မှတ်တမ်း
ထလော့ သူ့ကျွန်မခံသူ အပေါင်းတို့ !
ငါတို့ရဲ့ သွေးသားတွေနဲ့ မဟာတံတိုင်းသစ် တည်ဆောက်ကြစို့ !
တရုတ်ပြည်သူတွေ အရေးကြုံတဲ့ အချိန် ကို ရောက်နေပြီ
နောက်ဆုံး အားလုံးရဲ့အသံ မြည်ဟိန်းလာလေပြီ
ထလော့! ထလော့! ထလော့!
ရန်သူ့ အမြောက်ဆန်ကို မမှုဘဲ ရှေ့သို့ ချီတက် !
ရှေ့သို့ ချီ ! ရှေ့သို့ ချီ ! ရှေ့သို့ ချီ .. ချီ !
၁၉၇၈–၁၉၈၁ ခုနှစ် ဗားရှင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
The great Communist Party leads us in continuing the en:Long March!
↑ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသများဖြစ်သည့် ဟောင်ကောင် နှင့် မကာအို တို့တွင်လည်း လွှမ်းမိုးသည်။
↑ Resolution on the Capital, Calendar, National Anthem, and National Flag of the People's Republic of China. 1st Chinese People's Political Consultative Conference (Beijing), 27 September 1949. Hosted at Wikisource.
↑ Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region, Annex III. 7th National People's Congress (Beijing),4April 1990. Hosted at Wikisource.
↑ Basic Law of the Macao Special Administrative Region, Annex III. 8th National People's Congress (Beijing), 31 March 1993. Hosted at Wikisource.
↑ Constitution of the People's Republic of China, Amendment IV, §31. 10th National People's Congress (Beijing), 14 March 2004. Hosted at Wikisource.
↑ 《中华人民共和国国歌》 [Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Guógē, "National Anthem of the People's Republic of China"]. State Council of the People's Republic of China (Beijing), 2015. Accessed 21 January 2015. (in တရုတ်)
↑ "National Anthem" Archived4December 2017 at the Wayback Machine.
zh:中华人民共和国国歌 (in zh-cn)။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရ။
တရုတ်အမျိုးသား နိုင်ငံတော်သီချင်း (အင်္ဂလိပ်)
တရားဝင် တေးဂီတ ဗားရှင်း, တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရ ၏ စီစဉ်မှု
တရားဝင် အသံ ဗားရှင်း, တရုတ် အင်တာနက် အချက်အလက် စင်တာ ၏ စီစဉ်မှု
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏_ချီတက်ပွဲ&oldid=738653" မှ ရယူရန်
မေလ ၂၀၂၀ မှ တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်သည့် ဆောင်းပါးများ
မေလ ၂၀၂၀ မှ ဗလာအပိုင်းများပါသည့် ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၃:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။